Maxaabiis badan oo laga sii daayay Xabsiyada Itoobiya kadib cadaadis xoogan oo la saaray Dowlada Tigrayga!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Maxaabiis badan oo laga sii daayay Xabsiyada Itoobiya kadib cadaadis xoogan oo la saaray Dowlada Tigrayga!!
Maxaabiis badan oo laga sii daayay Xabsiyada Itoobiya kadib cadaadis xoogan oo la saaray Dowlada Tigrayga!!
Dowlada Itoobiya xabsiyada dalkaasi ka sii deysay dad ka badan 2 kun oo qof, kuwaa oo ciidamada amaanka ay xireen intii lagu guda jiray xaalada deg dega ah ee dhawaan lagu soo rogay dalka Itoobiya.
Wasiirka Difaaca Itoobiya Siraj Fegessa ayaa bixiyay amarka dadkan xabsiyada looga sii daayay, dowlada ayaana sheegtay in maxaabiista la sii daayay ay garawsadeen in ay qaladaad ku jireen ayna ka waantoobeen.
Xabsiyada dalka Itoobiya waxaa wali ku xiran kumanaan maxaabiis ah kuwaa oo iyana lasoo xiray kadib markii dalkaasi qeybo kamid ah ay ka curteen rabshado ay dhigayeen qoymiyadaha Oromada iyo Amxaarada.
Hay’ada u dooda xaquuqda aadanaha iyo wadamo caalamka kuyaala ayaa dowlada Itoobiya cadaadis xoogan ku saaray sidii ay xabsiyada uga sii deyn laheed dadka u xiran, waxaana Dowlada loogu baaqay in ay joojiso awooda ay adeegsaneyso.
Maxaabiista xabsiyada laga sii daayay iyo kuwa wali xiran oon tiradooda la sheegin ayaa u badan dhalinyaro iyo siyaasiyiin kasoo jeeda Qoymiyadaha Oromada iyo Amxaarada kuwaa oo dhigayay banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan Dowlada ay tigreyga hogaamiso.
Dadka lasiidaayay ayaa ah dad shacab ah halka siyaasiin ah Oromo, Soomaali, Amxaaro iyo Saraakiil sar sare oo kamid ahaay Dowladii leesku oranjiray Itoobiya kuwaas oo ay uxeran yihiin baqdin ay kaqabaan awoodoooda mucaaradnimo, Mucaaradka ayaa wali sii qorsheeynaya sidii gabi ahaanba awooda geeska Áfrika ay ku leeyihiin Tigray sida looga masixi lahaa.
Itoobiya Tigray ayaa gaartay Heer ee Madaxtooyinka Soomaaliya Xafiisyo iyo saldhigo kadhigtaan waxayna ku kala yaalaan xafiisyadooda Madaxtooyada 1: Muqdisho Villa Soomaaliya, 2: Madaxtooyda Hageysa, 3: Madaxtooyada Jubaland 4: Madaxtoyada Koonfur galabeed, 5:Madaxtooyada Jigjiga, iyo 6: Madaxtooyda Garoowe waliba waa halka ay shalay isku garab istaageen Baarlamanka Putland.
Maamulada kale sida Galmudug, Khaatumo state iyo Hiirshabeele wali ma aysan ka sameesanin Xafiis Madaxtooyo balse waala arki doonaa sida ay usii Balaartaan Xafiisyadii Tigrayga ee kuleedahay Soomaaliya ama sida looga masaxo xafiisyadaas oo Soomaaliya lagu dhibo.
Previous PostDAAWO: Xaalada QANDALA oo kacsan, Diyaarado dagaal iyo Maraakiibta NATO oo Dul yimid & Shacabkii oo ka yaacay mashruucaas!! Next PostDaawo Sawirro: Madaxweyne Uhurru oo ka codsaday Cumar Al Bashiir in uu taageero Musharax Aamina Maxamed!!